बिहे गरेको महिना दिन नबित्दै के भयो आशा खड्कालाई ? – Gazabkonews
पारुले ल्याइन् ‘तिम्रो तृष्णा’ : एक दशकपछि गायिका पारु राई ‘तिम्रो तृष्णा’ बोलको गीत लिएर श्रोता र दर्शकमाझ आएका छन् । एक दशकअघि उनले ‘प्यास’ नामक एलबम बजारमा ल्याएकी थिइन् ।गीत ‘तिम्रो तृष्णा’मा उनलाई ‘भ्वाइस अफ नेपाल’का फाइनलिष्ट विकास लिम्बुले साथ दिएका छन् । गीतमा पारुकै शब्द तथा ताराप्रकाश लिम्बुको संगीत छ ।
यूके र नेपालका विभिन्न सुन्दर तथा रमणीय ठाउँमा छायांकन गरिएको भिडियोमा मण्डल थेवे, पारु राई, विकास लिम्बु र वृक्षा लिम्बु फिचर्ड छन् । भिडियोमा कुशल श्रेष्ठको छांयाकन, सम्पादन एवं निर्देशन भने नेपालतिरको निर्देशन सुरज तामाङले गरेका हुन् ।भिडियोमा विपना गुरुङको मेकअप, आशीष श्रेष्ठको सह–छायांकन र नवीन निरौलाको रंग संयोजन छ ।
अभिनेत्री पूजा र आँचलको ‘धारै नखोली’ : भिडिओमा अभिनेत्री पूजा र आँचलभिडिओमा अभिनेत्री पूजा र आँचल नेपाली सिनेमाका तीन चर्चित अनुहार अभिनेत्री पूजा शर्मा र आँचल शर्माका साथमा नायक आकाश श्रेष्ठ एउटै भिडिओमा देखिएका छन्।समिक्षा अधिकारी र रोशन अधिकारीको स्वरमा समावेश ‘धारै नखोली’ बोलको गीतमा यी कलाकार एकै ठाउँमा देखिएका हुन्। भिडियोमा गायक रोशनले पनि अभिनय गरेका छन्।
यो गीतमा दिनेश राज पुरीको शब्द र अर्जुन पोखरेलको संगीत रहेको गीतको भिडिओ निर्देशक विधान कार्की हुन्।भिडिओमा सुरेन्द्र बसेलको कोरियोग्राफी, विकास दाहालको सम्पादन, उत्सव दाहालको छायांकन छ।डान्सिङ नम्बरको यस गीतको भिडिओ हाल ट्रेन्डिङमा छ। गीतको भिडिओ डिभाइन म्युजिकको युट्युब च्यानलबाट अपलोड गरिएको हो।
चर्चित कोरियोग्राफर गीता कपुर बलिउडका अविवाहित सेलिब्रेटी मध्य एक हुन् । उनले अहिलेसम्म आफ्नो जीवनसाथी रोजेकी छैनन् । अहिले भने गीताको केही तस्बिर बाहिर आएको छ । जुन चर्चामा छ । तस्बिरमा गीताले सिउँदोमा सिन्दुर लगाएकी छन् । तस्बिरका कारण उनको विवाहको हल्ला फैलिएको छ ।गीताले गोप्य रुपमा विवाह गरेको मानिसहरुको भनाई रहेको छ । रातो पहिरनमा देखिएकी गीताले रातो लिपस्टिक र रातै टिका लगाएकी छन् । रिंग र झुम्काको साथै उनको गलामा नेकलेस पनि देख्न सकिन्छ । उनको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।
फ्यान उनको तस्बिर देखेर प्रश्न गरिरहेका छन् ‘सिन्दुर कसको नामको हो ? एक फ्यानले लेखेका छन्, ‘माको सिउँदोमा सिन्दुर ..माको विवाह कहिले भयो । अर्काे एकले लेखेका छन् सिन्दुर कसको नामको हो मा ।’कामको कुरा गर्ने हो भने गीता डान्स रियालिटी शो ‘सुपर डान्सर च्याप्टर ४’ को जर्ज हुन् । उनले फिजा, अशोका, साथिया, हे बेबी, अलादीनलगायत थुप्रै फिल्ममा कोरियोग्राफी गरेकी छन् । उनलाई फ्यान प्रेमले गीता मा भनेर बोलाउने गर्दछन् ।